August 8, 2021 - Babal Khabar
Aug82021 by EditorNo Comments
कस्तो पुरुष संग बढी रुचि राख्छन् महिलाहरु ? जान्नुहोस् …
बैसाख जेठको गर्र्मीमा केटीहरुलाई कुखुरा पालुं कि पोईला जाउं जस्तो हुन्छ भन्थे सांच्चै त्यस्तै भएको थियो मलाई । कोठाभित्र गुम्सिएर म अनेक रंगीन कल्पनामा डुब्दै थिएं । मेरो शरिरमा पातलो सुतीको म्याक्सी मात्र थियो । म्याक्सीभित्र पेण्टी र ब्रा फुकालेर मिल्काई सकेकि थिएं । एक त गर्मीले गर्दा शरिरमा टाँसिने कपडाहरु लगाउनै नसकिने त्यसमाथी यसरी रोमाञ्चित हुने कल्पनाको रंगीन संसारमा डुब्दा मलाई त्यस्ता कपडाहरुले अवरोध खडा गरेको महसुस हुने गर्छ । Watch this video पढ्नको लागी खोलेको किताब खुल्लै मेरो पेटमाथी घोप्टो परेर नाईटोमा मुख जोतिरहेको थियो । म एउटा हातले म्याक्सी माथी बाटै आफ्नै छाती खेलाईरहेकि थिएं । मलाई आफैंले छाती खेलाउंदा थोरै दुख्ने गरेर स् त न को मु ण् टो निचार्यो भने आनन्द लाग्छ – त्यसैले पनि होला मेरो छातीको गोलाई र स्त न को मुण् टो निक्कै सप्रेको निबुवा जस्तो ठुलो ठुलो भएको
सुन किन्दै हुनुहुन्छ ? सुबर्ण अबसरा !सुनको भाउ तोलामै ह्यात्तै घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौँ । आइतबार सुनको भाउमा भारी गिरावट आएको छ । सुनको मूल्यमा एकैदिन प्रतितोला १ हजार ५०० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आइतबारका लागि छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ९० हजार रुपैयाँ र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ८९ हजार ५०० रुपैयाँ तोकेको छ । आइतबार बजारमा यही मूल्यका आधारमा सुन खरिद बिक्री भइरहेको छ । अघिल्लो दिन छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ९१ हजार ५०० र तेजाबी सुनको मूल्य ९१ हजार थियो । यसैगरी चाँदीको भाउ पनि तोलामा २५ रुपैयाँले घटेको छ । आइतबार चाँदीको चाँदी प्रतितोला १ हजार २४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । अर्को खबर सोलुखुम्बु । छयासी मेगावाट क्षमताको सोलुखोला (दूधकोशी) जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको साहस ऊर्जा लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ । जिल्लाको थुलुङ दूधकोशी–३ पञ्चनमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्ष
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या २० करोड नाघ्यो कुन देशमा कतिको ज्यान गयोत हेर्नुहोस्
काठमाडौं । विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या २० करोड नाघेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ५ लाख ६८ हजार २९० जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै विश्वभर संक्रमितको २० करोड २ लाख ९३ हजार पुगेको छ । यही अविधमा संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या ४ लाख १० हजार ७ सय ५७ छ । पछिल्लो विवरणसँगै विश्वभर संक्रमण जित्नेको संख्या १८ करोड २२ लाख ७९ हजारभन्दा बढी छ । होम तथा संस्थागत आइसोलसनमा रहने सक्रिय संक्रिमतको संख्या १ करोड ६३ लाख ५३ हजार ६९ छ । यसमध्ये ९८ हजार ५४१ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । आइतबार बिहानसम्मको तथ्यांकानुसार विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि मृत्यु हुनेको संख्या ४२ लाख ९८ हजारभन्दा बढी छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ९ हजार ६ जनाको मृत्यु भएसँगै विश्वभर संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४२ लाख ९८ हजार ७४७ पुगेको छ । खोपको विकासपछि विश्वभर जारी खोप अभियानले महामारी नियन्त्रण र मृत्युदरमा केही कमी ल्याए पन
यी ३५ बर्षिय आन्टिलाई रुम सेयर गरी बस्ने मर्द केटो चाहियो । कोहि छ ? भिडियो सहित
के जीवन बिताउन श्रीमान् नै चाहिन्छ त ? जीवन विताउनका लागि श्रीमान् वा श्रीमती नै चाहिन्छ त ? दाम्पत्य जीवन विताउनै पर्छ त ? यसमा एउटा ठूलो जमातले सहमतिको टाउको हल्लाउन सक्छन् । तर, एउटा जमात यस्ता पनि छन्, जो दाम्पत्यलाई ब`न्ध`न ठान्छन् र त्यसबाट उन्मुक्त जीवन विताउन राजी हुन्छन् । विवाह गर्नैपर्छ भन्नेमा सबैको रा-य मिल्छ भन्ने पनि छैन । कतिपय यस्ता हुन्छन्, जो विवाहलाई अनिवार्य ठान्दैनन् । उनीहरु विवाह नगरी एक्लो जीवन विताउनमै कल्याण मान्छन् । अहिले त केसम्म हुने गरेकाे छ भने, कुनै पुरुष वा महिलाबाट सन्ता-न जन्मा-उने र अविवाहित आमा वा बुवाको रुपमा जीवन विताउने सम्मकाे चलन भनाै एउटा मान्छेकाे साेचाई बन्न थालेकाे छ । याे पनि,जेठ महिनाको त्यो शनिबार , म आफ्नो कोठाभित्र पढ्न बसेकि थिएं । दिउँसोको त्यस्तै साढे बार बजेको हुंदो हो । बाहिर लागेको चर्को घामले रुखविरुवाका पातहरु लल्याकलुलु
“म संग एक रात सु’त्नुहोस तपाइको ‘गुन’ तिर्न अरु छैन” भनेपछी केटाले यस्तो दुनिया अचम्मित बनाउने जबाफ दियो (भिडियो सहित)
“आजको प्रस्तुति यो एउटा कथा नभएर काठमाडौँका धेरै ठाउँहरुका हकिकत कथा पनि हो। हामी काठमाडौँमा रातीमा डुलेका छैनौ भने सायद ग्यान नै छैन होला। कतै बाध्यताले मान्छे रातारात बिग्री रहेका छन् त कतै रहरले बिग्री रहेका छन्। आजको यो कथा बरिस्ठ पत्रकार यबं साहित्यकार कृष्ण आचार्यले लेख्नु भएको हो। उहाँले लेखेको कथा खर्हो मिडिया च्यानलमा बाचन गरिएको थियो । लिफ्ट को लागी हात हल्लियो। यति राती मागिएको लिफ्टलाई बेवास्ता गर्नु हुदैन भन्ने लग्यो। प्राय अफिसको काम सकेर म रातको १२ बजे घर जान्थे। नयाँ बानेस्वर बाट किर्तिपुर सम्मको यात्रा हुन्थेयो। त्यस दिन पनि म बबर महल पुगेको थिए। जहाँ कुनै युवतीको हात हल्लियो र म आफ्नो मोटर साईकल रोक्न बाध्य भए। ‘प्लिज मलाइ लिफ्ट दिनुहोस न दाई ट्याक्सीनै पाइएन’ मधुर आवाजमा उसले भनि र उसको दाई शब्दले मलाई कता कता नरमाईलो लाग्यो। एक पटक उ तिर कर्के नजर लगाए। साच्चै
फेसबुकबाट चिनजानपछि विदेशबाट आएको त्यो केटाले मलाई गर्भवती बनाएर भा’ग्यो! यसको कानुनी कारबाही कसरी गर्नुहोला ?
फेसबुकबाट चिनजानपछि बसेको माया प्रेमले जीवनमा कहिल्यै नभुल्ने चोट देला भनेर शुक्लाफाँटा नगरपालिका–४ की ताराले कहिल्यै पनि सोच्नुभएको थिएन । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट चिनजान र त्यसपछिको माया प्रेमले गहिरो घाउ देला भनेर कल्पनासमेत उहाँले गर्नुभएको थिएन । डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका ग्वानीका रमेशले वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा छँदा फेसबुकमा निकै मायापिरतीका कुरा गरी, ****सुदुर समाज ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’*****, भविष्यका मिठा सपना देखाई तारालाई आफ्नो बनाउने कसम खाएका थिए । मायापिरती बसेको एक वर्ष नबित्दै रमेश वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्किए । तारालाई आफ्नो बनाउन गरेको बाचा पूरा गर्न तारालाई भगाएर लगे । “गत वर्षको फागुन ११ गतेको कुरा हो”, ताराले भन्नुभयो, “घरमै आएर रमेशले घरका अभिभावकसँग माग्नका लागि आमाबुवालाई पठाउँछु भनेर एक रात हाम्रै घरमा बसे । भोलिपल्ट मलाई
ब्वाईफ्रेन्डले भन्दा अर्काको पोइले मज्जा आउने गरि गर्दोरहेछ भनेर गायिका लक्ष्मी आचार्यले एक युटुब च्यानललाई अन्तरवार्ता दिएकी छिन् भिडियो अन्तिममा छ । त्यो भन्दा उनको बारेमा केही जानकारीहरु……. गायिका लक्ष्मी आचार्य यतिबेला चर्चामा छिन् । उनले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको दुई गीत ‘मस्त जवानी..’ र ‘भिटामिन..’ अहिले दर्शकश्रोताको जनजिब्रोमा झुन्डिन सफल भएको छ । गीतको सफलताले पनि उनलाई अहिले देश बिदेशको स्टेज कार्यक्रममा ब्यस्त बनाएको छ । गायनको अलवा मोडलिङमा समेत क्रियाशील उनले आफ्ना प्रायः गीतको भिडियोमा आफै मोडलिङ गर्ने गरेकी छन् । मोतीनगर टिकापुर कैलालीकी आचार्यले बिगत ७ बर्षदेखि गायन र मोडलिङ एकसाथ अगाडी बढाउँदै आएकी छन् । दोहोरीबाट कलाक्षेत्रमा हामफालेकी आचार्यले तीन चर्चित लोकदोहोरी एल्बम समेत श्रोतालाई दिएकी छन् । ‘नजिक नजिक सछर्न्’, ‘तीन साल अमेरीका’, ‘यो मोरीको घैंटोमा कहिले घाम
नेपाल समूहमा मारामार, भीम रावलमाथि रामकुमारी मुखमुखै लाग्दा प्रचण्डलाई किन भेटेको भन्दै माधवमाथि खनिए नेताहरु
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको केन्द्रीय समिति बैठक बसिरहेको छ । बैठकमा नेताहरुबिच बाझाबाझ भएको छ । विहीवारदेखि जारी बैठकमा एकता गर्ने कि नयाँ पार्टी खोल्ने भन्ने बहस भइरहेको छ । एमाले मिलाउन गठित कार्यदलका सदस्य एकता गरेर पार्टीभित्रै संघर्ष गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्को पक्ष भने अध्यक्ष केपी ओलीसँग एकता हुनै नसक्ने भन्दै ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा नयाँ पार्टी खोल्नुपर्ने पक्षमा छन् । यहीँ विषयमा माधव समूहको बैठकमा बाँझाबाझ भएको हो । खासगरी पार्टी मिलाउन सक्रिय कार्यदलका सदस्यहरु भीम रावलदेखि सुरेन्द्र पाण्डेहरुमाथि माधव समूहका केन्द्रीय सदस्यहरु खनिएका थिए । उनीहरुले रावलहरुमाथि केपी ओलीकै लाइनमा गएकोदेखि आफ्नो समूहमाथि घात गरेको आरोप लगाएका थिए । आफूहरुमाथि गम्भीर आरोप लगाएपछि रावलले पनि प्रतिवाद गरेका छन् । रावलहरुमाथि विजय गुरुङ, वि
फर्सीको मुन्टा खाने गर्नुभएको छ ? संसारमै सबै भन्दा स्वस्थ जीवन छ हजुरको, नछुटाई पढ्नुहोला
एजेन्सी । हुन त बजारमा वा तपाईँको करेसावारीमा विभिन्न प्रजातीका सागहरु सजिलै पाउन सकिन्छ । तर, तपाईँले प्रयोग गर्ने सागहरुको प्रजातीमध्ये एक हो फर्सीको मुन्टो वा भनौ फर्सीको पातको साग । उसो त फर्सी पनि खानु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै नै लाभकारी हो ।तर, फर्सीको पात वा मुन्टो खानाले हामी विभिन्न रोगबाट जोगिन सक्छौँ । फर्सीको पातको साग वा फर्सीको मुन्टो खानुको फाइदाबारे सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले आज हामी तपाईँलाई फर्सीको पातको साग खानुको फाइदाबारे जानकारी दिन चाहन्छौ । फर्सीको साग विभिन्न पौष्टिक तत्वले भरिएको हुन्छ । फर्सीको साग भिटामिन ई, सी, ए, बी ६, पोेटासियम, फोलिक एसिड, क्याल्सियम, कपर, प्रोटिन, म्याग्नेशियम, आइरन, फाइबर, फस्फोरस जस्ता खनिज पदार्थको राम्रो स्रोत हो । हामीलाई स्वस्थ रहनका लागि शरीरमा यि सबै तत्वको आवश्यक्ता पर्दछ । युएसडीए नेशनल न्युट्रिएन्टको अध्ययन अनुसार फर्स